सौन्दर्यमा बृद्धि ल्याउन अपनाऔं केही यस्ता उपाय…. – जनस्वास्थ्य खबर
सौन्दर्यमा बृद्धि ल्याउन अपनाऔं केही यस्ता उपाय….
सुन्दर देखिन जो कोही पनि चाहन्छन् । विशेषगरी महिलाहरुको हकमा यो कुरा बढी लागु भएको देखिन्छ । तर, समय परिवर्तनसँगै व्यस्त र प्रतिस्पर्धाको जीवनशैली, कामको तनाव, अस्वस्थयता, उदाशिनताले अधिकांश मानिसहरु तनावग्रस्त रहन्छन् ।
त्यसमा पनि धेरै महिलााहरुको घर गृहस्थी र बाहिरको काम गरेर दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुनाले उनीहरु अझ तनावग्रस्त रहने गर्दछन् । तनाव सगै थपिएको थकानले सौन्दर्यमा दुष्प्रभाव अझ बढी परिरहेको हुन्छ । त्यसमाथी दिनभरको थकान सँगै राती राम्रो निन्द्रा नपरे स्वास्थ्य र सुन्दरतामा थप नकरात्मक असर पुर्याइरहेको हुन्छ । राम्रो स्वास्थ्यको लागि निन्द्रा निकै महत्वपुर्ण मानिन्छ ।
त्यसमाथि सौन्दर्यलाई बृद्धि गर्न वा कायम राख्नको लागि त झन हरेक व्यक्तिलाई प्रयाप्त निन्द्राको जरुरत हुन्छ । जब हाम्रो शरीरलाई आराम हुन्छ तब मात्र शरिर स्वस्थ्य बन्छ । त्यसको सिधा असर हाम्रो शरीरको छालामा पर्दछ ।
सौन्दर्य बृद्धिको लागि राम्रो निन्द्राको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले राम्रोसँग निन्द्रा लाग्नका लागि ध्यान पुर्याउनुस् यि कुराहरुमा :
१. मनलाई शान्ती प्रदान गर्ने खालको पुस्तक पढ्ने जसले मन हलुंगो भइ निन्द्रा लाग्छ ।
२. राती खुकुलो प्रकारको कपडा लगाएर सुत्नुपर्दछ, उज्यालो बत्तीको प्रकाशमा सुत्नु हुँदैन ।
३. वेडमा जानु अगाडी नै बाथरुमको काम सकाउनुपर्छ, जसले गर्दा राती उठ्नु जरुरी हँदैन ।
४. चिन्ता तनाव, डाह, इष्र्याबाट मुक्त हुने, सकरात्मक सोच राख्नुपर्छ, योग, ध्यान व्यायाम गर्ने, सन्तुलित जीवनशैलि अपनाउने ।
५. सुत्नुअघि ऐना सामु उभिएर हास्नुस र आफैलाई शुभरात्री भन्नुहोस् । यसबाट आफैप्रति संम्वेदनशील बनिन्छ र आफ्नो सौन्दर्यप्रति सेचत भइन्छ ।
६. सुत्नेबेलामा मुस्कुराउदै आफुले आफैलाई शुभरात्रीको कामना गर्नुहोस, जसले तपाईको अनुहारमा थप उत्साह जगाउछ, थकान बिर्साएर मिठो निन्द्रा लाग्छ ।
डन्डिफोर छालाको एक समस्या हो । यसले मानिसलाई कुरूप त बनाउँछ नै, छालासम्बन्धी अन्य विभिन्न समस्या पनि निम्त्याउने गर्छ । त्यसैले डन्डिफोर आउन नदिन सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ । तर, डन्डिफोर आइहाले के गर्ने त ?
यस्ता महिला सायदै हुन्छन्, जसलाई मेकअपको आधारभूत ज्ञान हुँदैन । यस्ता महिला सायदै हुन्छन्, जो सौन्दर्य प्रशाधनबारे बेखबर हुन्छन् । अधिकांश महिलालाई मेकअपबारे जानकारी हुन्छ, सौन्दर्य प्रसाधनबारे थाहा हुन्छ ।
तर, धेरैलाई थाहा हुँदैन, कस्तो सौन्दर्य प्रशाधन बढी उपयोगी र प्रभावकारी हुन्छ ? कसरी गरिने मेकअप दीगो र आकर्षक हुन्छ ?
जस्तो मस्कराको कुरा गरौं ।
महिलाहरुले प्रयोग गर्ने विभिन्न मेकअप मध्य मस्कारा पनि एक हो । मस्काराले आँखालाई सही आकार दिएर ठूलो देखाउनुका साथै आँखालाई सुन्दरता कयौ गुणा बढाउँछ ।
त्यसैले त, जतिबेला आँखालाई सुन्दर देखाउने कुरा हुन्छ, तब महिलाहरुले आँखाको मेकअपकालाई आई लाइनर, गाजलको साथमा मस्कारा लगाउन छुटाउँदैनन् । मस्कार भलै सामान्य लाग्न सक्छ । तर, यस्ता सामान्य कुराले पनि हाम्रो समग्र सौन्दर्यलाई प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ ।
त्यसैले मस्कारा लगाउन पूर्ण मस्काराबारे यी कुराबारे जानिराख्न जरुरी छ ।
-मस्कारा खरिद गर्दा आफ्नो आवश्यकता अनुसार व्रशको चुनाव गर्नुपर्छ । किनकी मस्कारामा दुई तरीकाको ब्रश हुन्छ, एकले फूल भोल्यूम इफेक्ट अर्थात परेलालाई बाक्लो देखाउँछ भने अर्को हाई डेफिनिशन ल्यासेजले परेलालाई आकर्षक देखाउँछ ।
-मस्कारा खरिद गर्दा सुख्खा मस्कारा छ कि छैन भनेर ख्याल गर्न जरुरी छ ।
-मस्कारा खरीद गर्दा ब्रशलाई भित्र-बाहिर गर्नु हुन्न । अन्यथा, ब्रशमा हावा भरिएर मस्कारा विग्रन सक्छ ।
-दैनिक प्रयोगका लागि वाटर प्रुफ मस्कारा खरीद गर्नु हुँदैन ।
-परेला बाक्लो भएमा क्लियर वा ट्रान्सप्यारेन्ट मस्कारा लगाउनु पर्छ । किनकी परेला बाक्लो र्भमा त्यसलाई अझै बाक्लो बनाउनु पर्दैन । सेप मात्र दिए पुग्छ ।
-कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग गर्नेहरुले मस्कारा लगाउनु पूर्व नै लेन्सको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
-मस्कारा लगाउँदा जरादेखि लगाउनु पर्छ ताकी परेला लामो देखियोस् ।
-मस्कारा लगाउँदा दाँया बायाँ फैलिएमा सुखेपछि मात्र पुछ्नु पर्छ । अन्यथा मेकअप खराब हुन सक्छ ।
-मस्कारा लगाउँदा जहिले वपन माथि फर्काएर मात्र लगाउनु पर्छ ।
-महिनौ अघिदेखि राखिएको मस्कारा जमेमा वा गाढा भएमा त्यसलाई पातलो बनाउन पानीको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
-आँखामा कुनै किसिमको एलर्जी भएमा पनि मस्कारा लगाउनु हुँदैन ।
-आँखा सानो भएमा कालो आइलाइनर वा मस्कारा लगाउनु हुँदैन । अन्यथा, आँखा अझै सानो देखिन्छ । त्यसैले यस्ता आँखामा जहिले पनि व्लु सेडको मस्कारा प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
-आँखामा डार्क सर्कल भएमा आँखाको तल्लो परेलामा मस्कारा लगाउनु हुँदैन ।
-छालाको रङ्ग गोरो भएमा कालो मस्काराको सट्टा डार्क ब्राउन मस्कारा लगाउनु राम्रो हुन्छ ।
लिपस्टिक लगाउने समयमा ख्याल गर्नै पर्ने कुरा
ओंठको सौन्दर्यका लागि लिपस्टिक प्रयोग गरिन्छ । यो युवतीहरुको अनिवार्य सौन्दर्य प्रसाधन हो । अन्य मेकअप नगर्ने युवतीहरु समेत लिपस्टिक चाहि प्रयोग गर्न रुचाउँछन् । तर, लिपस्टिक कसरी प्रयोग गर्ने ? यसको सहि विधी जान्न सके थप आकर्षक देखिन्छ ।
लिपस्टिक लगाउनुअघि आफ्नो ओंठलाई हल्का स्क्रब गरौ, ताकि ओंठको मृत कोशिकााबट छुटकारा मिल्न सकोस् । यसले लिपस्टिक ओंठमा राम्ररी लाग्छ र ओंठको प्राकृतिक रंगसँग मिल्छ पनि ।
लिप बामको अधिक प्रयोग नगरौ
ओंठको मोश्चराइज गर्नु ठीक हो । तर लिप बामको धेरै प्रयोग ठीक हुन्न । यसले लिपस्टिकलाई तपाईको ओंठमा लामो समय टिक्न दिदैन । बरु, ओंठमा लिप बामलाई हल्कासँग मात्र लगाउने र त्यसको दश मिनेटपछि लिपस्टिक लगाउने ।
ओंठलाई तयार गरौ
कतिपयको ओंठ पिग्मेन्टेड हुन्छ । र, लिपस्टिकको सहि शेड ओंठमा देखिदैन । त्यसैले ओंठमा प्राइमरको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । प्राइमर लिपस्टिकलाई लामो समयसम्म टिकाउँछ । साथै फैलनबाट पनि बचाउँछ ।
लिप लाइनरको प्रयोग
हामी जान्दछौ कि, लिप लाइनरको काम हो लिपस्टिकलाई ओंठको भित्र बनाउने । तर, यसलाई ओंठमा लगाउँदा लिपस्टिक लामो समयसम्म टिक्छ ।
के तपाईको लिपस्टिक अक्सर बग्छ ? त्यसो हो भने यसलाई सहि ढंगले सेट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ओंठमा पारदर्शी वा लुज पाउडर लगाउनु पर्छ । र, त्यसपछि पुन एक पत्र लिपस्टिक लगाउनुहोस् ।
दाँतमा लिपस्टिक लाग्नबाट बच्ने
दाँतमा लिपस्टिक लाग्नु हुँदैन । त्यसका लागि एउटा राम्रो काइदा छ । लिपस्टिक लगाइसकेपछि एक औंलालाई मुखभित्र राखेर ओंठ खोल्ने र बन्द गर्ने । ओंठमा लगाएको अतिरिक्त लिपस्टिक औंलामा आउँछ ।
स्टिकलले लिपस्टिक लगाउँदा संभवत यो ओंठको किनार र क्रीजलाई कभर गर्दैन । त्यसैले लिप ब्रसको प्रयोग सहि हुन्छ । यसले ओंठ सुन्दर देखाउँछ । ब्रसको मद्दतले किनारमा पातलो लिपस्टिक लगाउन सकिन्छ ।